Ace मोटो राइडर 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
ऐस मोटो राइडर
अघिल्लो खेल: मेरो पिज्जा आउटलेट
अर्को खेल: महजोंग यात्रा
वार्षिक अफ-रोड मोटरसाइकल दौड सुरु हुन लागेको छ, रमाईलो ट्र्याकहरू, सीमा भन्दा पर गति, बहु रंगीन मोटरसाइकलहरू, केहि तपाईं चाहानुहुन्छ Ace Moto Rider खेलमा प्राप्त गर्न सकिन्छ! नहिचकिचाउनुहोस्, आएर प्रतियोगितामा सामेल हुनुहोस्! यो याद गर्नु उपयुक्त छ कि विपक्षीको गति पनि धेरै छिटो छ, तपाईं विपक्षीको गाडीबाट बच्न सधैं सचेत हुनुपर्छ! त्वरण समय सीमित छ। यस छोटो त्वरण समयको फाइदा लिनुहोस् तपाईंको विपक्षीलाई ओभरटेक गर्न। एकै साथ तपाईले ट्राफिक नियमहरूको पनि सम्मान गर्नुपर्दछ। तपाईं वास्तविक रेखामा ओभरटेक गर्न सक्नुहुन्न। के तपाई तयार हुनुहुन्छ?